Horudhac: Burnley vs Chelsea… (Wax waliba oo aad uga baahan tahay kulanka ka dhacaya garoonka Turf Moor) – Gool FM
(Burnley) 31 Okt 2020. Kooxda Burnley ayaa dooneysa inay guuleysato kulankeedii ugu horreeyay ee Premier League xilli ciyaareedka, waana isku daygii lixaad ah marka ay Chelsea ku soo dhaweynayso garoonkeeda Turf Moor Maqribnimada maanta oo Sabti ah.
Blues ayaan wax badan ku faanin sidoo kale kulammada gudaha, laakiin wiilasha Frank Lampard ayaa fududeysay guushii 4-0 ay ka gaareen FC Krasnodar ee Champions League Arbacadii, waxaana ay kulankan soo galayaan iyadoo ay niyaddu u dhisan tahay.
Xiddiga kooxda Burnley ee Berg Gudmundsson ayaa shaki la galinayaa kaddib dhaawac uu ka qabo kubka, halka Erik Pieters uu la maqnaan doono dhibaato middaa la mid ah.
Phil Bardsley ayaa sii joogteyn doona maqnaan shihiisa kaddib markii laga helay Korona Fayras, halka kulankan uu hoosta ka soo galay oo uu aad ugu soo deg degay labada xiddig ee Ben Mee iyo Jack Cork.
Tababaraha Kooxda Chelsea ee Frank Lampard ayaa la soo warinayaa inaysan kooxdiisa wax dhaawacyo cusub ah aysan ka soo gaarin kulankii Arbacaddii ay guusha ka heleen Krasnodar
Thiago Silva ayaa nasiino la siiyey kulankii dhowaa, waxaana uu qarka u saaran yahay inuu ku soo bilowdo kulanka maanta.
The Blues ayaan heli doontin adeegga goolhayaheeda Kepa Arrizabalaga, kaasoo garabka dhaawac ka sheeganaya, halka Billy Gilmour uu isna weli ka soo kabanayo qalliin looga sameeyey jilibka.
>- Kooxda Burnley guusha kaliya oo ay gaartay 12 kulan oo Premier League ay ku wajahday Chelsea waa kulankii ka dhacay garoonka Stamford Bridge bishii Agoosto sanadkii 2017-kii, kaasoo ay 3-2 kaga adkaatay, waxaana ay ka heystaan 3 barbaro iyo 8 guuldarro.
>- The Blues ayaa guuldarro la’aan ah dhammaan lixdii kulan ee Premier League oo ay u safartay Burnley, waxaana ay dhalkiyeen labo gool ama in ka badan shantoodii kulan ee ay ku soo gaareen garoonka Turf Moor.
>- Guushii ugu dambeysay ee Clarets ay garoonkeeda kaga gaarto Chelsea waxa ay ahayd bishii Agoosto ee sanadkii 1973-kii, markii Frank Casper uu dhaliyay goolka kaliya oo ay ku adkaadeen.
>- Burnley ayaa guuldarro la kulmi karta afar kulan oo xiriir ah garoonkeeda horyaalka Premier League markii ugu horreysay tan iyo sanadkii 2010-kii.
>- Sidoo kale waxa ay halis ugu jiraan inay shan guuldarro la kulmaan lixdooda kulan ee furitaanka horyaalka markii ugu horreysay tan iyo 1927-28, waxayna xilli ciyaareedkaas ka badbaadeen inay u laabtaan heerka labaad.
>- Kooxda Sean Dyche ayaa badisay kaliya hal kulan 24-kii kulan ee ugu dambeeyay ee ay garoonkeeda kula ciyaartay kooxaha waa weyn ee lixda ah, waxayna ka haysataa 4 barbaro iyo 19 guuldarro, guushaasna waxay ka timid Tottenham bishii Febraayo ee 2019-kii.
>- Haddii uu taam yahay, Johann Berg Gudmundsson ayaa ciyaari kara kulankiisii 100-aad ee Premier League.
>- Ashley Westwood iyo Chris Wood ayaa labaduba safashadoodii 100-aad u sameyn kara Premier League kooxda Burnley.
>- The Blues ayaa shabaqeeda gool ka ilaashatay kulamo xiriir ah horyaalka markii ugu horreysay inta ay ka hoos ciyaarayso kooxdu tababare Frank Lampard.
>- Chelsea ayaa laga dhaliyey 42 gool oo Premier League ay ku soo ciyaareen meel ka baxsan garoonkooda tan iyo bilowgii xilli ciyaareedkii hore, waana in saddex ka badan koox kasta oo kale.
>- Lixdii kulan ee ay marti ahaayeen horyaalka xilli ciyaareedkan, waxaa goolal u kala dhaliyey lix ciyaaryahan oo kala duwan waana; Jorginho, Reece James, Kurt Zouma, Mason Mount, Callum Hudson-Odoi iyo Tammy Abraham.
>- Edouard Mendy ayaa noqon kara goolhayihii saddexaad oo shabaqiisa gool ka ilaashada saddexdiisa kulan ee ugu horreeya kooxda Chelsea ee horyaalka Premier League, isagoo ku dayan kara Neil Sullivan iyo Petr Cech.